देश – Page 229 – Himalitimes
Apr32018 by HimalitimesNo Comments
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीमा तीन मन्त्रीसमेत सहभागी हुने ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र २०, २०७४ |
काठमाडौ,२० चैत - मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने तीन दिने भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा तीन मन्त्रीसमेत सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव काठमाडौंबाटै प्रधान
कहाँ अडकियो वाम एकताको घोषणा प्रक्रिया ?
काठमाडौं,२० चैत्र - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि नै गर्ने भनिएको एमाले र माओवादी एकता लम्बिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ । राजनीतिक र सांगठनिक तथा विधान कार्यदलले प्रतिवेदन टुंग्याइसके पनि तीन विषयमा तत्काल गाँठो फुक्ने स्थिति नदेखिएपछि एकता घोषणाको तयारी लम्बिएको हो । तीनवटै विषय गम्भीर र आपसमा जेलिएका कारण दुवै दल गृहकार्यविना तत्काल एकता घोषणाको मिति टुंग्याइहाल्ने
Apr22018 by HimalitimesNo Comments
गृह मन्त्रालयद्वारा थप २२ हजार प्रहरीको दरबन्दी रोक्का ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र १९, २०७४ |
काठमाडौं,१९ चैत – संघीय संरचनाका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीले माग गरेको २२ हजार थप दरबन्दीको फाइल गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ । प्रहरीले गत साउनमा संघीय संरचनाका लागि भन्दै एआइजीदेखि सिपाहीसम्मको नयाँ दरबन्दी माग गरेको थियो । प्रहरीबाट माग भएबमोजिमको थप दरबन्दी कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि गृहले फाइल अघि नबढाएको हो । प्रहरीले मा
Apr12018 by HimalitimesNo Comments
काङ्ग्रेस नेता खड्काको अन्तिम सस्कारमा सशस्त्रको सलामी, कांग्रेसले ५ दिन देशभर शोक मनाउने ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, चैत्र १८, २०७४ |
काठमाडौं, १८ चैत - भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा शुक्राबार निधन भएका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य खुमबहादुर खड्काको आईतबार साँझ अन्तिम सस्कार गरिएको छ । अन्तिम संस्कार सशस्त्र प्रहरीको एक टुकुडीले खड्कालाई सलामी अर्पण गरेको थियो भने खड्काको चितामा उनका छोरा अनुरागले दागबत्ती दिए । खड्काको निधनमा नेपाली कांग्रेसले ५ दिन देशभर शोक मनाउने भएको छ । आइतवार कांग्रेसको
अवकाश पाएका ब्यक्तीबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ गराउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सर्बोच्चको आदेश ।
काठमाडौं, १८ चैत - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पदमुक्त भएका सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथ गराउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले अवकाश पाएको व्यक्तिले खुवाएको सपथ संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै चैत ४ गते रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा उक्त
गाडीमा गीत बजाउदा पनि अब पैसा तिर्नुपर्ने, होला त कार्यान्वयन ?
काठमाडौं ,१८ चैत - सार्वजनिक सवारी साधनमा गीत बजाउँदा अब रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भएको छ । संगीतकर्मीको अर्थोपार्जन र सांगीतिक क्षेत्रमा आर्थिक टेवा पुर्याउनका लागि नेपाल संगीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले यस्तो नियम ल्याएको हो । निजी सवारी साधनबाहेक सार्वजनिक सवारीमा मात्र लागु गरिने यस नियमलाई चाँडै कार्यान्वयन गरी रोयल्टी उठाउन सुरु गरिने समाजका महासचिव संगीतकार महेश खड्काले जानकारी दिए । अन्तर्र
Mar302018 by Himalitimes1 Comment
नेपालगन्जमा हुने बृहत ठकुरी भेलाको तयारी तिब्र, कैलाली कञ्चनपुरबाट निशुल्क सवारीको ब्यबस्था ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १६, २०७४ |
काठमाण्डौ,१६ चैत- आउदो चैत २४ गतेका दिन बाकेको नेपालगन्जमा हुन गइरहेको ठकुरीहरुको बृहत भेलाको तयारी तिब्र पारिएको छ । कार्यक्रमको समय नजिकिएसङ्गै यसको आन्तरिक तयारी तिब्र पारिएको हो । भेलामा विश्वभरीका ठकुरीहरुको सहभागी हुने छ । विश्व ठकुरी समुदायको साझा थलो ठकुरी सहयोग संजालको अयोजनामा हुन गइरहेको यो पाचौ वृहत जमघट तथा भेटघाट कार्यक्रम हो । यसअघि ललितपुर, काठमाण्डौ, भक्तपुर र काभ्रेमाआफ्नो
Mar302018 by HimalitimesNo Comments
टेलिकमले सुरुगर्यो ब्यालेन्स सापटी सेवा, कसरी सुचारु गर्ने सुबिधा ?
काठमाडौं,१६ चैत - सरकारी स्वामित्वको दुरसचार सेवा प्रदायक सस्था नेपाल टेलिकमले नमस्ते क्रेडिट सेवाको व्यावसायिक सुरूवात गरेको छ । राजधानीमा एक औपचारिक कार्यक्रममा बिच सेवाको सुरूवात सुचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेका छ्न । सेवा सुरु भएसँगै सेवाग्राहीले ब्यालेन्स सकिएपनि बिना अवरोध सेवा जारी राख्न सक्नेछन् । सेवा जारी हुँदा प्रयोग रकम सापटीको रूपमा टेलिकमबाट उपलब्ध
Mar292018 by HimalitimesNo Comments
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले भन्यो- कुनचाहिँ पहिला, नमुना नयाँ नेपाल कि क्रीकेट स्टेडियम ?
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १५, २०७४ |
काठमाडौं, १५ चैत-सामाजिक क्षेत्रमा चर्चित धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको संयोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सामाजिक संजाल फेसबुकमा बिहीबार स्टाटस राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण कार्यको संयोजन गर्ने निर्णयमा आफूहरू पुगेको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको हो । भुकम्प पछीको निर्माणमा विभिन्न बस्तीहरु बनाउदै सामाजिक हितमा सक्रीय हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल
Mar282018 by HimalitimesNo Comments
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १४, २०७४ |
काठमाडौँ,१४ चैत - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदावधि नै नभएको व्यक्तिसँग सपथ लिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको शपथ विरुद्ध रिट दायर भएको हो । चैत ४ मै अधिवक्ता नारायण खरेल र हेममणि सुवेदीले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट निवेदन बुधबार मात्र दायर भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले निवर्तमान प
Previous 1 … 228 229 230 … 261 Next